20 Feb 2018 | मंगलबार, ८ फागुन, २०७४ | Edition : Nepal | UK | Australia
News | Tag: Canada
किन भारत आए क्यानडाका प्रधानमन्त्री ?
ओटावा, क्यानडा । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो सात दिन लामो भ्रमणका सिलसिलामा आइतबार भारत आएका छन् ।
क्यानडाले नेपाललाई १९५ रनको चुनौती दियो
काठमाडौँ । नामिबियामा भइरहेको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुई को अन्तिम लिग खेलमा क्यानडाले नेपाललाई १९५ रनको चुनौती दिएको छ ।
मान्नै पर्ने नियम: महिनाको एकपटक श्रीमतीलाई कुट्नै पर्ने
किन गरिए ब्रजिल र क्यानडाका कूटनीतिज्ञ देश निकाला ?
बिबिसी । भेनेजुएलाले ब्रजिलका राजदूत र क्यानेडाका कार्यवाहक राजदूतलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ। भेनेजुएलाको शक्तिशाली संविधानसभाकी प्रमुखले क्यानेडाले भेनेजुएलाको आन्तरिक
क्यानडामा अर्बपति र उनकी श्रीमती मृत भेटिएपछि...
बिबिसी । व्यापारी शेरम्यान विशाल औषधी कम्पनी 'एपोटेक्स'का संस्थापक र अध्यक्ष थिए। प्रहरीले उनीहरुको मृत्युलाई शंकास्पद भनेको छ। उनीहरुको शव तल्लो तला (बेसमेन्ट)मा फेला परेको बताइएको छ।
विश्वका यी ६ अनौठा ठाँउहरु जहाँ सुर्य कहिल्यै अस्ताउँदैन
एक दिनमा १२ घण्टा दिउँसो र १२ घन्टा राति हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा त हामि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर विश्वमा केही यस्ता ठाँउहरु पनि छन् जहाँ चौबिसै घण्टा दिउँसो हुन्छ ।
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा 'ह्यान्डसम' प्रधानमन्त्री, लाखाैं युवतीहरू छन् फ्यान
क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो विश्वकै सबैभन्दा 'ह्यान्डसम' प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई देखेर धेरै सुन्दर युवतीहरु पनि उनी प्रति आकर्षित हुन्छन् । आफ्नो हसिँलो र मिलनसार स्वभावको कारणले मिडियामा यिनको धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ ।
विद्यालयमा अमेरिका र क्यानडाबाट पढाइ
सल्यान, १ चैत । एक विद्यालयमा अमेरिका र क्यानडाबाट पढाइ हुन थालेको छ ।
क्यानडाले बाह्र हजार शरणार्थीलाई प्रवेश दिने
क्यानडा, ११ फागुन । क्यानडाले इश्लामिक स्टेट (आइएस) लडाकुको कारबाहीको जोखिममा रहेका १२ हजार शरणार्थीलाई क्यानडा प्रवेशमा स्विकृति दिने भएको छ ।
मस्जिदमा आतङ्ककारी आक्रमणको प्रधानमन्त्रीद्वारा निन्दा
ओट्टावा, १७ माघ । क्यानाडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रडोले क्युवेक सहर रहेको एक मस्जिदमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणको सोमबार निन्दा गरेका छन् ।
अमेरिकाले रोकेका आप्रवासीलाई क्यानाडाले स्वागत गर्ने
ओट्टावा, माघ । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टीन त्रुदेउले अमेरिकाले बन्देज गरेका विदेशी शरणार्थी तथा आप्रवासीहरुलाई क्यानाडाले स्वागत गर्ने बताएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई खुसीको खबरः क्यानडामा पिआर पाउन झनै सजिलो
क्यानडाले नयाँ इमिग्रेशन मापदण्डहरुको घोषणा गरेको छ । यस घोषणाले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई धेरै फाइदा पुग्ने भएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरु पनि हजारौको संख्यामा क्यानडामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मोबाइल, ल्यापटपसम्बन्धी प्राविधिक बन्ने युवाहरुलाई समेट्दै एलाइन्स
प्रचण्डको प्रष्टोक्तिः पाँच वर्ष ओली नै प्रधानमन्त्री
यी बलिउड अभिनेत्रहरुले बिकिनी पोज नदिएकै राम्रो !
कास्की र दमकमा बम विस्फाेट, एक प्रहरी र पत्रकार घाइते
वैज्ञानिकले गरे भविष्यवाणी, यति वर्षपछि पृथ्वीबाट हराउने छ मानव अस्तित्व
फुट्नबाहेक नजानेका कम्युनिष्टले जुटेर देखाउन सक्लान् ?
अाेली सरकारकाे सिफारिस शीतल निवासद्वारा केही घण्टामै सदर, राष्ट्रियसभाले पायाे पूर्णता
भावी आईजीपीको लागि दौडधुप, रमेश खरेलको प्रबल सम्भावना
'अक्षय र मैले एक मन्दिरमा सुटुक्क इन्जेगमेन्ट गरेका थियौ'
बल्न छाडे महानगरका सडकका बत्ती
यसकारण कण्डम मन पराउँदैनन् युवतीहरु !
एजेन्सी । जान्नु आवश्यक छ कि सेक्स जहिले पनि सेफ रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि । असुरक्षति यौनका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा कण्डमको प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ । सेफ सेक्सका लागि कण्डम भरपर्दो अस्थायी साधान समेत मानिन्छ ।
मोवाइमा 'पोर्न फिल्म' हेर्ने गर्नुभएको छ ? सावधान !
यी हुन् भारतीय मुलका १२ चर्चित पोर्न स्टार
उनले यसको विकल्प स्वरुप अर्को ग्रह खोज्नुपर्ने बताएका छन् । हकिङ्सले भनेका छन्,‘मलाई लाग्दैन कि अर्को ग्रह नखोजी पृथ्वीमा एक हजार सालसम्म मानिसहरु जीवित रहन सक्छन् ।’
यस्ता छन् अनार खानै पर्ने कारणहरु
महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस्, यी घरेलु उपायहरु
जब यी अमेरिकन राष्ट्रपतिहरु यस्ता विवादहरुमा फसेँ
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु कतिपय राजनैतिक चर्चाभन्दा पनि सेक्स स्क्याण्डलका कारण चर्चामा आए । उनीहरुको यही चर्चाले कतिपय राष्ट्रपतिहरु आलोचित छन् । सेक्स स्क्याण्डलको रहस्य खुलेपछि
सर्टिफाइड दुलाहा !
मेरा श्रीमान् जब त्यो रात हाम्रो घरबाट बाहिर निस्के, मलाई लाग्यो मेरो सारा संसार नै भताभुङ्ग भयो
थाहा पाउनुहोस् ‘आइ लभ यु’ भन्न पहिले कति समय पर्खने !